I-Apple yokutshintsha i-Iconic yeFifth Avenue Ivenkile yeCube eNew York | Ndisuka mac
Ukusukela ukuvulwa kwayo, ivenkile yeFifth Avenue eNew York iye yenyanzelekile ukuba ibonwe ngabo bonke abalandeli beApple. Le venkile yaba ngumqondiso wenkampani enkosi ityhubhu yeglasi eyenziwe nguYobhi ngokukodwa kule venkile, ityhubhu enamacala ayo ancitshisiwe ngenxa yemigaqo yedolophu. Ukusukela ngoJanuwari ophelileyo, la maziko avalwe ngenjongo yohlengahlengiso, uhlengahlengiso oluza kusebenza njengenyathelo lokwandisa indawo efanayo, ukusuka phantse kwi-3000 yeemitha zesikwere ukuya kwi-7000.
Kodwa olu hlaziyo alwenzi njalo ijolise kuphela ekwandiseni indawo yokugcina, kodwa iya kuvumela nokwenziwa maxesha kwezixhobo ezizilungelelanisileyo kuyilo olutsha esinokuzibona kwiiVenkile zeApple ezisandula ukuvulwa. Kwakhona, njengoko sinokufunda kwi-BuildZoom, ityhubhu yeglasi enkulu iya kutshintshwa. Izicwangciso zesiza apho i-BuildZoom ifikeleleke khona ukuba ulwakhiwo olutsha olunobungakanani obufanayo luya kususwa ngokupheleleyo, kwaye ulwakhiwo olutsha olunobungakanani obufanayo luya kutshintshwa, emva kokufumana imvume efanelekileyo kwiBhunga lesiXeko leSixeko saseNew York.
Njengesiqhelo, Amaxabiso endleko zemisebenzi eyenziwa nguApple axhome kakhulu. Ukuze ususe lonke ulwakhiwo kwaye ubeke enye yemilinganiselo efanayo, abafana abavela eCupertino kuya kufuneka bahlawule i-2 yezigidi zeedola. Ngelixa ivenkile ye iconic isakhiwa, iApple iseke iVenkile yeApple okwethutyana kufutshane nala maziko ukuhlangabezana nemfuno ephezulu yeendwendwe ezifunyanwa yile venkile yonke imihla. Ivenkile entsha yeApple iya kuba ne-radio booth ye-Beats 1, ukuze umvakalisi osasaza eNew York aqhube udliwanondlebe, kunye nokwenza enye i-acoustic yabo bonke abazimasevenkile kunye nababhalisi be-Apple Music.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ibuyisele ityhubhu ye iconic kwivenkile yeFifth Avenue eNew York